Nockherberg Starkbierfest - म्यूनिख बलियो बियर महोत्सव | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > Nockherberg Starkbierfest – म्यूनिख बलियो बियर महोत्सव
Most beer-loving travelers have Munich high on their to-do list. यो एक Oktoberfest पनि त्यहाँ भनेर दिइएको गर्नुपर्छ, तर Nockherberg Starkbierfest – म्यूनिख बलियो बियर महोत्सव अतिरिक्त केही ल्याउँछ. कुनै, छैन भीडलाई. तपाईं गर्नेछौं अनुभव आधा धेरै. तर बियर बल डबल! बन्द बर्खास्त गर्न सही तरिका जस्तै सुनिन्छ मार्च र वसन्त, हामीलाई!
म्यूनिख, Bavaria राजधानी, छ शताब्दीपछि पुरानो भवन घर र धेरै संग्रहालयहरु. शहर आफ्नो वार्षिक Oktoberfest उत्सव र यसको बियर हल लागि जानिन्छ, को famed Hofbrauhaus सहित, मा स्थापित 1589. को Altstadt मा (पुरानो सहर), केन्द्रीय Marienplatz वर्ग जस्तै नियो-गोथिक Neues Rathaus रूपमा स्थलहरू समावेश (सभा गृह), झंकार र 16 औं शताब्दीमा देखि कथाहरू reenacts एक लोकप्रिय ग्लोकेन्सपियल शो संग.
बलियो बियर तिहार बियर उद्यानमा र Oktoberfest जस्तै म्यूनिख पर्छ. वास्तबमा, यो बियर तिहार शहरमा सर्वोत्तम राखिएको गोप्य हुन सक्छ. यो वास्तवमा Oktoberfest भन्दा पनि पुरानो छ, मध्य-1600 का मा सुरु, म्यूनिख गरेको Paulaner भिक्षुहरूले र Paulaner Nockherberg द्वारा म्यूनिख गरेको बलियो बियर तिहार लागि मूल स्थल छ!
तर बाहिर, Starkbier गर्छ, को पाठ्यक्रम, एक उच्च रक्सी सामग्री (देखि लिएर 7.5%-9%). मा स्वाद सर्तहरू, यो malty र आश्चर्यजनक छ (सायद म deceivingly भन्नुपर्छ) चिकना र यसको प्रभाव पक्कै हुनेछ 1000% तपाईं छिर्न. जस्तै, "कृपया महोदया, तालिका मा नाच रोक्न - तपाईं मा बच्चाहरु "छिर्न डरा हुनुहुन्छ. तपाईं चेतावनी दिए गरिएको छ.
कुरा माथि योग: starkbier बलियो बियर छ, यो रक्सी सामग्री तर पनि भंग ठोस मा बलियो छ, यो तपाईं र गडबड तपाईं भर्न हुनेछ. तपाईं चेतावनी दिए गरिएको छ!
प्रमुख सुपरमार्केट चेन र किनमेल गर्दा आउटलेटहरू तपाईंको क्रेडिट कार्ड स्वीकार गर्न सम्भावना, म्यूनिख सबैभन्दा रेस्टुरेन्ट र पसलहरुमा मात्र नगद वा आयोग-कार्ड स्वीकार गर्नेछ (जो डेबिट कार्ड जस्तै हो). निश्चित दैनिक उपयोग को लागि तपाईं संग पर्याप्त यूरो छ.
म्यूनिख एक रेल टिकट बुक गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि जानुहोस् SaveATrain जहाँ तपाईं कुनै peaky संग मिनेटमा आफ्नो टिकट प्राप्त, थप र लुकेका शुल्क!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र केवल एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/nockherberg-starkbierfest-munich-beer-festival/ - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#Beerfestival #NockherbergStarkbierfest #बलियो बियर ट्याप #TraveltoMunich भालु यात्रा drinkfestival म्यूनिख